नेपालीटेकब्लग (nepalitechblog) – एउटा अर्को नेपाली टेक ब्लग – Nepali Tech Blog
कुनै पनि विचारहरु नयाँ हुदैनन् रे । अनि, सँगसँगै पुराना पनि हुन्नन् रे । पहिले कसैले सोचिसकेको होला भनेर सोच्न छोड्ने र पहिले कसैले थालिसकेको होला भने सुरु नगर्ने हो भने कहाँ पुगिएला ? जीवन कस्तो होला ? यो त अति प्रवचन पो भयो कि क्या हो ! खासमा म आज एउटा प्रबिधिसँग सम्बन्धित नेपाली ब्लग चलाउँने विचारमा पुगेको छु । गन्ने हो भने नेपालीमा यस्ता ब्लगहरु धेरै होलान् । तर अनुभवमा आधारित मेरो यो ब्लग अरुभन्दा भिन्न होला भन्ने आशा गर्छु ।
यो ब्लगमा तपाईले निम्न कुराहरुका बारेमा जानकारी पाउँनु हुनेछ :
१. ब्लगिङ निर्माण र विकास
२. अनलाइन कमाई
३. मोबाइल र कम्प्युटरका सामान्य ह्याकिङहरु
५. सोसल साइटहरु
६. प्रबिधिका सूचना, जानकारी तथा अफरहरु
आउँदै गर्नुहोला र कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला । तपाईले आफुलाई आवश्यक परेको जानकारीका बारेमा मलाई सोझै सोध्न सक्नुहुनेछ । यसका लागि सम्पर्क पेजमा गएर आफ्नो समस्या लेख्नुहोस् ।
वा, कुनै पनि ब्लगमा कमेन्ट गरे हुन्छ ।